Ukhenketho lwaseJamaica luvuza ivolontiya laseJapan ngeeholide zokunethezeka
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » Ukhenketho lwaseJamaica luvuza ivolontiya laseJapan ngeeholide zokunethezeka
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • Iindaba zaseJapan eziQhekezayo • iindaba • Sports • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Ukhenketho lwaseJamaica luvuza iJapan njengevolontiya.
Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica Mhlonishwa. U-Edmund Bartlett uxele ukuba iBhodi yezoKhenketho yaseJamaica ngoncedo lwabathathi-nxaxheba balapha bazakunikela ngevolontiya laseJapan i-Olimpiki, uTijana Kawashima Stojkovic, kunye neendwendwe azikhethileyo, uhambo olukhethekileyo oluhlawulwa eJamaica. Olu hambo, oluquka iiparishi ezine, luya kubandakanya ukutyelela kwiindawo ezinomtsalane kunye nokuhlala kwiihotele ezintlanu zodidi.
UTijana uncedise iJamaican Hurdler Hansle Parchment kwiiOlimpiki eTokyo, eJapan.
Endleleni eya kumdyarho wakhe wokugqibela, uParchmnet ngempazamo uthathe iShuttle Bus engalunganga enikezwe ngabaququzeleli bomnyhadala.
UStojkovic unike isikhumba se-10,000 yen (ngaphezulu nje kwe-US $ 90) ukuhlawulela ukuthuthela kwi-Olimpiki Stadium eTokyo ngoLwesibini, nge-3 kaJulayi.
Isimemo sandisiwe eStojkovic njengomqondiso wokubulela ukunceda iJamaican Hurdler kunye ne-Olimpiki yeGolide ye-Olimpiki, uHansle Parchment, ukuba baye e-Olimpiki Stadium kukhuphiswano lwabo lokugqibela, emva kokuba ethathe ibhasi engeyiyo xa esiya kwindawo.
Isibhengezo senziwe phezolo (nge-18 ka-Agasti) ngexesha lomsitho obubanjwe ngokudibeneyo yiBhodi yezokhenketho yaseJamaica kunye neNdlu yoZakuzo yaseJamaica eJapan.
“Kuyandonwabisa ukukumema kunye nendwendwe ngendleko zonke ezihlawuliweyo uhambo oluya eJamaica Ukuva ukuba kutheni 'siyiNtliziyo yeHlabathi.' Uza kunyangwa kwiziko likaMongameli eliyiDiamond Club lenkonzo kamongameli eRoyalton eNigril, kunye nembono entle kunye nenkonzo esemagqabini yeeHalf Moon kunye neehotele zeIberostar eMontego Bay, utshilo uMphathiswa uBartlett.
“Iholide yakho izakuthatha kunye nendwendwe lakho ukuya kwiNdlu yeNyanga eOcho Rios, kwaye niyakuziva ukubetha kweKingston kwihotele i-AC Marriott. Ayiphelelanga apho, kuba uyakonwabela indawo ekuyiwa kuyo, ezakuthatha kuhambo olubonisa ulonwabo kunye nenkcubeko entle phakathi kwezinto ezininzi, ”wongeze watsho.
UStojkovic wanika isikhumba i-10,000 yen (ngaphezulu nje kwe-US $ 90) ukuba ahlawule ezothutho eziza kwi-Olimpiki Stadium eTokyo ngoLwesibini, nge-3 kaJulayi, kumdyarho wakhe wokugqibela, emva kokuba ngempazamo ethathe i-Shuttle Bus engalunganga enikezwe ngabaququzeleli bomnyhadala. Ngenxa yokuncedwa kwakhe ngokungazingci, uParchment wakwazi ukufika kwibala ngexesha kwaye wabekwa kwindawo yesibini kumdlalo wakhe wokugqibela kwaye kamva waphumelela imbasa yegolide kumdlalo wokugqibela.
“Ndifuna ukukubulela kwakhona kwaye nditsho indlela endinombulelo ngayo ngoncedo ondinike lona kwi-Olimpiki nendlela endivumele ngayo ukuba ndiphumelele imbasa yegolide. Ndenze ibali [kwimidiya yoluntu] kwaye ndabelana ngalo nosapho lwam, abahlobo kunye nabaxhasi. Bonke babone intliziyo entle nenobubele onayo… Sijonge phambili ekutyeleleni kwethu Isiqithi esihle saseJamaica, ukuze nizokuza nibe nexesha elimnandi nosapho lwenu, ”watsho uParchment.
UStojkovic uvakalise umbulelo ngesimemo wathi, “Ndonwabe kakhulu yile nto… ndenze nje konke okusemandleni ukunceda kwaye ngoku ndonwabile koku.”
“Isigqibo sikaTijana sokungazingci kwaye ancede umntu angamaziyo ngoyena mntu ubalaseleyo kuluntu. Isenzo sakhe sobubele saphinda savakala kwihlabathi liphela kwaye sisikhumbuza ukuba kuninzi okungakumbi okulungileyo emhlabeni namhlanje ... Esi senzo sobubele simele eyona ndwendwe yabantu baseJapan kwaye bonke abantu baseJamaica banombulelo kuye, ”utshilo uBartlett. .